Ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi - China Sanding Caps Ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya
Parameters nke Sanding Cap
Ụdị ihe: Igwe ọkụ eletrik na ngwa ngwa
13mm dayameta site na 19mm ogologo sanding okpu mandrel
52mm (2 1/16 ″) n'ozuzu n'ogologo
2.4mm (3/32 ″) ọkpụkpụ
Ihe: Plastic Sanding Bands
Oghere dị na rọba na-enye ohere mkpakọ ịwụnye ma wepụ okpu ájá wee gbasaa ka ọ sie ike, jiri 13 x 19mm Sanding Caps.
Iji rụọ ọrụ na okpu sanding
Ihe: Steel, Rubber
Okpu mkpuchi mkpuchi efu maka Manicure Pedicure #80 #120#180
★Nnukwu nha: iji gboo mkpa igwe nri dị iche iche.Ụdị na nha dị ihe dịka 16 x 25 mm / 0.6 x 1.0 sentimita asatọ, dị mfe iji wụnye na wepụ, yana dị mfe iji.Ọ nwere ike gboo mkpa nke nka ntu dị iche iche na ọtụtụ oge ọdabara.
★Ngwa ntu ndị ọkachamara: setịpụrụ nke emebere maka ịgba ntu nwere ike gboo mkpa gị.Ike dị elu, arụmọrụ dị elu, mmetụta dị mma, ogologo ndụ ọrụ, dị mfe iji, nchekwa na ntụkwasị obi.A na-eji elu ájá na-ehicha elu ntu ahụ na-adịghị mma.Ọ na-adịgide adịgide ma dị mfe iji rụọ ọrụ.
★Ntu polishing belt: kwesịrị ekwesị maka nhazi mbọ, iko, plastik, metal, nkume, tileti seramiiki, ceramics, wdg. Ngwunye na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke, arụmọrụ dị elu na arụmọrụ kwụsiri ike.Emebere ya maka ịchacha na ịkpụ mbọ, na-eme ka mbọ mara mma na ịdị mma.
★Ihe mmepụta ihe dị elu: A na-eji ihe resin dị elu mee ya, na-adịgide adịgide na nke na-eguzogide ọgwụ.Mmetụta egweri zuru oke, ịrụ ọrụ dị elu na ogologo ndụ ọrụ.Jiri ájá dị mma dị elu, ájá nke na-adịghị mfe ịdaba, ị nwere ike iji ya mee ihe mgbe ọ bụla.
★Ọ dị mfe iburu: arọ dị arọ, obere nha, dị mfe ịchekwa na iburu, nwere ike inye aka dị ukwuu maka ọrụ manicure.Enwekwara ọtụtụ agba ịhọrọ site na, pink, blue, brown, red, and green.
Okpu aja aja Purple
Appr. Ibu: 250g/igbe (100pcs)
Ihe: akwa / plastic nkwado
mkpuchi: Agba Purple
mkpuchi: Agba ndụ ndụ
mkpuchi: Agba anụnụ anụnụ
Okpu aja aja odo odo
mkpuchi: Agba odo
mkpuchi: Agba uhie
mkpuchi: Agba ojii
mkpuchi: Agba pink
Okpu aja aja oroma
mkpuchi: Agba oroma
Okpu aja aja ọcha
mkpuchi: Agba ọcha